Sax Miyaa Tirokoobka Janaraal Galaal? Waa tan Caddeynta | Xaqiiqonews
Sax Miyaa Tirokoobka Janaraal Galaal? Waa tan Caddeynta
Dood Badan ayaa ka dhalatay hadal uu jeediyey Jaraalka Howlgabka ah Kalaal oo shir beshiisu isku timid ku soo bandhigay tirabooka laga sameeyey beelaha Soomaaliyeed-sida uu sheegay.
XAQIIQO NEWS- WAR IYO DHAMMAANTIIS
Warka: Janaraal Kalaal oo ka hadlaayey shirka beelaha Hawiye ayaa sheegay in beesha Hawiye ay bulshada Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda ku nool ay ka yihiin 38%, halka Isaaqa ay yihiin 25% isaga oo sidoo kale tilmaamay daaroodku in ay yihiin 18%.
Dhammaadkiisa: Aniga oo aan taageerin ama aan ka soo horjeedsan hadalka janaraal Kalaal, waxaan rabaa oo kaliya in aan ka jawaab seddex su’aal, oo kala ah: Ma jiraa Tirakoob lagu sameeyey beelaha Soomaaliyeed? Ma Jiraan Dad Soomaaliyeed Oo Tirakoobka Aan Qeyb Ka Aheyn? Beeshaadu in laga badan yahay ama laga yar yahay Maxay Kaga Dhigantahay?
Ma jiraa Tirokoob lagu Sameeyey Beelaha Soomaaliyeed?
Waxaan u maleynayaa in ay aheyd sanadkii 2011 waxaan aqriyey buug af-carabi ku qornaa oo ciwaankiisu ahaa “Jabhadihii Soomaaliya” waxaana qoray nin Soomaali ah oo rer Aw xasan ahaa, buugga dhaxdiisa waxaa ku qornaa tirakoobka beelaha Soomaaliyeed- mana aqaan sida saxda ah ee beelaha u kala qornaayeen, balse waxaan xasuustaa in mid ka mid ah beelaha ay u qorneyd 38% . Sidoo kale waqtiga oo aad u fogeyd darteed ma xasuusto halka buugaasi uu ka soo xigtay tirokoobka noocaasi ah.
Sidoo Kale Aqri: 3-Quraafaad Oo Wili Aad Aaminsantahay!
Inkastoo shakhsiyan aanan ogeyn tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyey beelaha, balse waxaa aan dhowr jeer arkay buugaag iyo qoraalo arimahaasi soo qaadanaya.
Hoose Ka Daawo Muuqaalka Kalaal Ee Muranka Dhaliyey
General Galaal “Dadka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyada kunool Hawiye boqolkiiba waa 38”
General Galaal “Dadka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyada kunool Hawiye boqolkiiba waa 38,waxaa kusoo xiga Isaaq boqolkiiba waa 25,Daarood boqolkiiba waa 18”
Posted by Official Somali Cable on Tuesday, 5 January 2021
Ma Jiraa Dad Soomaaliyeed Oo Tirakoobka Aan Qeyb Ka Aheyn?
Soomaalida Waxa ay dagaan Dhulka loo yaqaan geeska Afrika oo marka la fiiriyo sida ay Soomaalida ugu badan yihiin ay sax noqoneyeyso in aan dhahno “Geeska Soomaaliya” hase ahaatee inta badan tirakoobyada Soomaalida waxaa lagu soo koobaa oo kaliya “dhulka Jamhuuriyadda”.
Dabcan, farqi ayaa u dhaxeeya Dhulka Jamhuuriyadda xorta ah iyo dhulkii loo yaqiinay Soomaali Weyn, sidaa darteed marka aad maqasho tirada Soomaalida 15+ Milyan macnaheedu ma ahan Soomaalida oo dhan.
Beeshaadu in laga tiroob Badiyey ama Ay tiro koob badisay Maxay Kaga Dhigantahay?
Marka la baahiyo Tirakoobyada noocan ah dad qaarkiisa waxa ku sigtaan in ay farxad la biibaan, halka kuwa kale ay ciriir dareemaan. kama hadlaayo tirakoobka beelaha Soomaaliyeed, waxa aan ka hadlayaa tirakoob nooc uu doonaba ha ahaadee: tusaale tirakoob laga sameeyey sida dalalka aduunka u kala caqli badan yihiin?
“There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”- By Mark Twain
Waxaa jira seddex nooc oo been ah “Been, beenta nacladan, iyo tirokoob“
Ugu dambeyn waxaan kula wadaagayaa xaqiiqo jirto, inta ugu badan tirakoobyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ma ahan kuwo la isku haleyn karo “sax ahaan shahooda”, sidaa darteed hadii aad maqasho tirakoob kaliya waxa uu buuxinayaa rabitaanka cidda sameysay tirakoobka, ee ma haan mid saameeyn ama muhiimad gaar ah uga dhigan dadkii laga sameeyey.
Hadii aad u baahan tahay in ogaato sida tirakoobleyda u been badan yihiin, baaritaan ku sameey boggaga hay’daha QM iyo waxyaabaha ay ka faafiyaan Soomaaliya.